भारत–पाक तनाब उत्कर्षतिर ! काश्मिर हमलाको जवाफमा पाकिस्तानलाई भारतको हजार किलोको बम !
दर्जन युद्धपोतले पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमाथि हमला, ३ सय बढी आतंकमा संलग्नहरु मारिएको भारतीय सञ्चार माध्यमको दाबी
| 2019-02-26 Published
निर्माण सञ्चार, एजेन्सी । भारतीय युद्ध पोतले पाकिस्तानी सिमाना भित्रै छिरेर एक हजार किलो बराबरको बम हमाल गरेको छ । जुन हमलाबाट ३ सय बढी आतंकमा संलग्नहरु मारिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले दाबी गरेका छन् ।
आजको ठीक १२ दिन अघि भारत प्रशासित काश्मिरको पुलवामा पाकिस्तानले हमला गरेको थियो, त्यसको जवाफी कारबाही स्वरुप भारतले पाकिस्तानमाथि यो हमाल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुको विश्लेषण छ ।
मंगलबार बिहान करिब साढे तीन बजेतिर भारतीय वायुसेनाले पाकिस्तानविरुद्ध इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारबाही गरेको हो ।
उक्त समयमा भारतीय युद्धपोत मिराज–२००० लडाकू विमानले नियन्त्रण रेखा (एलओसी) पार गरी पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरमा छिरेर चरमपन्थी गुटमाथि कारबाही गरेको दाबी गरिएको छ ।
एक दर्जन लडाकू विमानको प्रयोग !
समाचार संस्थाहरुका अनुसार भारतद्वार गरिएको बम कारबाहीमा १२ वटा मिराज विमान प्रयोग भएका छन्, जसले एक हजार किलोको बम खसालेर भागेका थिए ।
भारतीय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार उक्त कारबाहीपछि विभिन्न चरमपन्थी क्याम्पहरु ध्वस्त भएका छन् । पाकिस्तानमाथिको आक्रमण भारतीय पक्षले पुष्टि गरिसकेको छ ।
गत १३ तारिखमा पुलवामा फिदायीन हमलामा सरकारी सुरक्षाका ४० जवानको मृत्यु भएको थियो, जुन आक्रमणको जिम्मेवारी जैश–ए–मोहम्मदले लिएको थियो ।
भारतीय मिडियाले भनेको छ, ‘बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबादमा जैशका इलाका ध्वस्त भएको छ । बालाकोट पाकिस्तानको प्रान्त खैबर पख्तूनख्वाहमा अवस्थित छ । हमला भएको स्थान एलओसीभन्दा करिब ५० किलोमिटर टाढा छ ।’
के भन्छ पाकिस्तान ?
भारतीय आक्रमणपछि छिमेकी पाकिस्तानले भारतले ‘घुसपैठमा आक्रमण गरेको’ भन्दै जवाफी युद्ध लड्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले एक ट्विटमार्फत् भनेका छन्, ‘भारतीय वायुसेनाले मुजफ्फराबाद सेक्टरमा घुसपैठको कोसिस गरेको थियो ।’
सोचेभन्दा ठूलो कारबाही !
भारतीय उक्त हमलालाई पाक पक्षले सोचेभन्दा ठूलो भनेको छ ।
जम्मू–कश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्री र नेशनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाले भारतको कारवाहीमा भनेका छन्, ‘यदि यो कुरा साँचो हो भने यो सानो हमला होइन । यो हामीले सोचेभन्दा ठूलो हमला हो ।’
भारतले यसरी गर्यो बचाउ
आफ्नो कारबाहीको बचाउ गर्दै भारतीय पक्षले ‘फेरि आक्रमण हुने सूचना पाएपछि प्रतिरक्षा’ गरिएको जिकिर गरेको छ ।
नयाँ दिल्लीमा मंगलबार बिहानको पत्रकार सम्मेलन भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले यसबारे स्पष्ट पारको थिए ।
उनले फेब्रुअरी १४ को पुलवामा आक्रमणपछि जैस ए मोहम्मदले फेरि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको सूचना आएको जिकिर गर्दै उसका अखडामा आक्रमण गर्नु आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘आज बिहान भारतीय वायु सेनाका जहाजले बालाकोटमा आक्रमण गरे । यो दुई दशकदेखि पाकिस्तानमा सक्रिय जैस ए मोहम्मदको सबैभन्दा ठूलो तालिम केन्द्रमा बम खसालिएको हो ।’
गोखलेले अघि भने, ‘आक्रमणमा जैस ए मोहम्मदका कमाण्डरसहित कैंयौं सदस्य मारिएका छन्। तर यसमा कोही पनि आमनागरिक परेका छैनन् किनकी यो तालिम केन्द्र बाक्लो जंगलबीच थियो।’
भारतले सर्वसाधारण नपरेको जिकिर गरे पनि पाकिस्तानी पक्षले भने सर्वसाधारण पनि हमलामा परेको जनाएको छ । तर, गोखेलले पाकिस्तान सरकारले आतंककारी समूहलाई प्रस्रय दिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले पाकिस्तानी सरकारको जानकारीबिना जैस ए मोहम्मदले आफ्ना गतिविधि गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
उनका अनुसार पाकिस्तानले भारतविरूद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको पालना नगरेकाले यो आक्रमण गर्नुपरेको हो ।
मंगलबार, १४ फागुन, ०७५